Hery Rajaonarimampianina : Nanome fanampiana misavovona ny FLM tao Farihimena -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Nanome fanampiana misavovona ny FLM tao Farihimena
Nanome voninahitra. Tonga nanotrona ny fanakatonana ny fankalazana ny faha-71 taonan’ny Toby Lehibe Farihimena, Antsirabe, miray ao amin’ny FFPM, ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, niaraka tamin’ny mpanolotsaina manokany, Mbola Rajaonah, ny sabotsy 26 aogositra teo. Nampitondraina ny teny faneva notsongaina tao amin’ny Soratra Masina ao amin’ny Asa 16:31 manao hoe “… Minoa an’i Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao” iny fankalazana isan-kerintaonan’ny Toby Lehibe Farihimena iny, izay nizotra ny 20 -26 aogositra.
Araka izany, toa ny isan-taona, nanome voninahitra an’Andriamanitra tao amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) tao Farihimena nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe ireo solontenam-panjakana notarihin’ny Filohan’ny Repoblika. Naharitra ora maro ny fotoam-pivavahana tamin’izany, izay nanomboka tamin’ny 8 ora maraina hatramin’ny 12 ora sy 30 mn teo ho eo. Ny pastora Randriantsarafara Gaston no nitarika ny fotoam-bavaka izay nontronin’ireo Raiaman-drenin’ny FLM, toy ny filohany, Rakotonirina David, sy ny filohan’ny Synôda…
Teo amin’ny fandraisam-pitenanana nandritra izany kosa dia nampanantena ireo mpino FLM sy ny vahoakan’i Farihimena ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa hiezaka ny hanamboatra ny lalana mihazo an’i Farihimena, izay tena potika tanteraka ny fitondram-panjakana, ary hanamboatra sy hijery manokana ny mahakasika ny rano sy ny jiro ihany koa.
Ankoatra izay, nambarany fa miara-miasa ary manatanteraka ny fandaharan’asan’ny Fiangonana ny Filoham-pirenena. Noho izay indrindra, tsy nanda ny fangatahan’ny FLM ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny fampitaovana ny birao sy ny Raiamandrenim-piangonana. Tamin’izany indrindra no nandraisany an-tanana ny fanamboarana ny fiara ampiasain’ny Raiaman-drenin’ny FLM ao Farihimena ankoatra ny nanolorany ireo môtô roa teo aloha.
10 tapitrisa Ar
Etsy andaniny, manoloana ny ezaka ataon’ny Fiangonana amin’ny fanorenana trano ho an’ny pastoran’ny FLM Farihimena, Rajoelson Jules, izay handeha hisotro ronono, nanolotra vola mitentina 10 tapitrisa Ar ho fanampiana amin’ny fananganan-trano ho azy ny Filoham-pirenena mivady. Raha ny voalaza mantsy dia mitentina 75 tapitrisa Ar ny totalim-bidin’ny fananganana ka tsy nisalasala ny Filoham-pirenena mivady nitondra ny anjara birikiny ho fanampiana ny Fiangonana amin’ny ezaka ataony.
Nampanantena ihany koa ny Filohan’ny Repoblika fa hojerena manokana ny mahakasika ny toby fitsaboana Loterana ao Farihimena. “Hojerena miaraka amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana ny mahakasika io tobim-pahasalamana eto aminareo io, indrindra ny mahakasika manokana ny fanafody”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Ankoatra izay, mikasika ny fangatahana fiara ho an’ny Raiamandreny eo anivon’ny biraom-piangonana ihany, nambaran’ny Filoha fa tsy fiara vaovao no hatolotra sy omena azy ireo hiasany fa ilay fiara teo aloha nampiasain’izy ireo ihany no raisin’ny Fanjakana an-tanana ny fanamboarana azy ary ho toa ny vaovao izany rehefa vita.
Marihina fa tamin’ny fomba manetriketrika kosa no nitsenan’ireo mpino marobe sy ny vahoakan’i Farihimena ny Filoham-pirenena sy ireo mpiara-dia taminy nahitana ny mpanolotsaina manokany, Mbola Rajaonah.
Raha ny mikasika ny lalana mihazo an’i Farihimena avy ao Antsirabe na koa avy ao Betafo, ratsy dia ratsy ary tsy afaky ny fiara madinika. Lalana mirefy 32 km io lalana io ary ora telo kosa no hanaovan’ny fiara tsy mataho-dalana na 4×4 azy. Mampiteny ny moana ny lalana mankao Farihimena ka izay indrindra no nahatonga ny FLM nangataka tamin’ny Filoham-pirenena ny fanamboarana azy. Ny Filoha Hery Rajaonarimampianina kosa tetsy ankilany nampanantena fa hiezaka hanamboatra sy hijery manokana io lalana mitondra mankany Farihimena Antsirabe io.